Tutankhamun | Coinfalls क्यासिनो
Tutankhamun छ भन्ने सुन्दर भिडियो स्लट खेल हो5रील र 20 paylines. यो मिश्री आधारित विषय स्लट पुन: भ्रमण र तपाईं बडा जीत प्राप्त गर्न पुरातन प्रतीक प्रयोग गरेको छ.
एक मिश्री फिरऊनलाई थियो, जो जिउँदै गाडिएको थियो र यो रहस्यमय मृत्यु वर्षमा पत्ता थियो 1922 हावर्ड कार्टर द्वारा.
तपाईं Coinfalls क्यासिनो मा नि: शुल्क दर्ता गर्न सक्छन् र यो खेल खेल्न र को ठूलो स्वागत प्याकेज आनन्द 200% £ 50.00 को थालनी जम्मा मा. यसबाहेक, हामी पनि यस्तो दिन को खेल रूपमा साप्ताहिक र मासिक पदोन्नति छ, Cashback दिन, र एक कुनै जम्मा बोनस तपाईं व्यस्त राख्न.
व्यावहारिक खेल Tutankhamun स्लट खेलको लागि सफ्टवेयर प्रदायक हो. ग्राफिक्स र गेमप्ले हात मा हात जाने. यो डिजाइनर ठूलो गुणवत्ता संग खेल डिजाइन गरिएको छ र त्यहाँ खेलाडी देखि भारी प्रतिक्रिया छ.
Coinfalls क्यासिनो मा मजा लागि प्ले मा Tutankhamun भिडियो स्लट प्ले गर्न सकिँदैन. तपाईं के गर्न छ सबै £ 100.00 गर्न 0.01p देखि एक सट्टेबाजी रकम राख्न छ. एक पटक तपाईं राखिएको गरेको सट्टेबाजी स्पिन बटन मारा र उच्च पुरस्कार प्राप्त.
खेल जस्तै कम मूल्य प्रतीक हुन्छन् 10, 9, जे, Q, एक, र K जो तपाईं x80 गर्न पुरस्कार गुणक भुक्तानी गर्नेछ. यो पनि यस्तो फूल रूपमा उच्च मूल्य प्रतीक प्रयोग, फूलदान, बाजको टाउको को आँखा, र गोल्ड प्रतीक.
यी प्रतीक X1 सम्म जीत तीन वा बढी आशा गर्न सक्छौं त को संयोजन मा देखा पर्न आवश्यक, 000 multipliers. यो फिरऊनको मास्क जंगली प्रतीकको रूपमा प्रतिनिधित्व छ x40 को आधार Jackpot रकम जीत तपाईं सक्षम, 000.
जंगली प्रतीक पनि स्क्याटर लोगो बाहेक रील मा सबै तस्बिरहरू विकल्प हुनेछ. तपाईं पनि x10 जस्तै अन्य multipliers जित्न सक्छौं, 000, X500, x100, र x40.
निःशुल्क spins सुविधा बित्तिकै त्यहाँ स्क्याटर तस्बिरहरू तपाईं प्राप्त हुनेछ जो स्क्रिनमा कहीं उतरा हुन् सक्रिय हुनेछ 15 x3 एक गुणक साथ निःशुल्क spins. यो प्राचीन देख रील खेल को एक whopping RTP आकर्षित 95.39% र त्यहाँ एक स्वतःप्ले मोडमा यो खेल मा उपलब्ध पनि छ.
Tutankhamun स्लट आधार Jackpot रकम मद्दत गर्न सक्छ खुसीसाथ खेल हो. ग्राफिक्स र पृष्ठभूमि संगीत शीर्ष निशान गुणस्तर को हो. यो रोमाञ्चक स्लट खेल खेल्न र एक स्वागत बोनस रमाइलो गर्न हाम्रो क्यासिनो मा अब दर्ता 200% आफ्नो पहिलो जम्मा मा.